Galmudug ayaa sheegay inay ka xun yihiin qaladka lagu xiray Gudoomiyaha Guddiga Doorashada madaxa Banaan Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo Yarey). – STAR FM SOMALIA
Galmudug ayaa sheegay inay ka xun yihiin qaladka lagu xiray Gudoomiyaha Guddiga Doorashada madaxa Banaan Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo Yarey).
Xaliimo Yarey ayaa waxaa looga hoyday qaladkii lagu xiray ee xabsi guriga looga dhigay, halka sidoo kalena la fasaxay darawalkii u waday gaariga oo ciidamada shalay galab ay xireen.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo Yarey) ayaa socdaal shaqo ku mareysa deegaano ka tirsan Gobolka Galgaduud.
Madax weynaha Soomaaliya oo Gaaray Magaalada Gaalkacyo
Dawladaha Turkiga iyo Soomaaliya Ayaa Hashiisyo Kalal Saxiixday (Daawo Sawiro)
Guddoomiyaha guddiga hirgalinta doorashooyinka heer federaal FEIT ee Soomaaliya Maxamed Xasan Maxamed “Cirro” iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhow gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee Maamulka Jubbaland.
Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyay Guddoomiyaha guddiga hirgalinta doorashooyinka heer Dowlad Goboleed SEIT ee Jubbaland Dr Siyaad Mursal Maxamed iyo xubnaha kale ee guddiga.
Ujeedka booqashada waftdigan ee magaalad Kismaay ayaa ah arrimo la xiriira qabsoomidda doorashada xildhibaanada Aqalka sare ee maalmaha soo socda ka dhici doona Jubbaland.
Wafdiga ka socda Guddiga Doorashooyinka ayaa lagu wadaa inay la kulmaan Madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Cirro ayaa ah markii ugu horeysay ee u gaaro mid kamid ah maamulada dalka oo lagu wado inay ka dhacdo doorashada Aqalka Sare.
Maamulka Jubbaland ayaa u muuqda in uu noqonayo maamulkii ugu horeeyay ee ay ka dhacdo doorashada xubnaha Aqalka Sare,iyadoo hore loo qorsheeyay inay dhacdo 25ka bishan oo ku beegan maalinta berri ah.
Dagaalka oo u dhaxeeya Ciidamada dowladda & kuwa Galmudug oo dhinac ah iyo Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka socdaa degaannada Miiroon iyo Eryaale oo u dhow degaanka Qeycad ee gobolka Mudug.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii Ciidamada Xoogga Dalka ,Daraawiishta Galmudug, iyo Danab ay weerar ku qaaday Deegaannadaas, halkaas oo ay ku sugan yihiin Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa ay sheegeen in weli dagaalka uu socdo, isla markaana khasaaro xoogan ay ku gaarsiiyeen Ururka Al-Shabaab.
Maalmihii La soo dhaafay ayaa waxa ka socday deegaanada gobalka mud dagaalo u dhaxeeyey cidamada is garabsanaayo iyo Alshabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa Booliska ayaa Maanta booqday hoolka loo asteeyay in lagu qabto doorashada Xilhdibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ee Magaalada Kismaayo.
Kormeerka Saraakiisha Ciidamada Booliska ee AMISOM ayaa waxaa uu ahaa mid qiimeyn iyo indho-indheyn ay ugu sameynayeen goobta loo asteeyay in Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland ku doortan Senatorada Aqalka Sare ee Baarlamaanka.
Saraakiisha ayaa warbixinno ka dhagaystay Guddoomiyaha guddiga hirgalinta doorashooyinka heer Dowlad Goboleed SEIT ee Jubbaland iyo guddoomiyaha guddiga Baarlamaanka Jubbaland u qaabilsan doorashada.
Guddiga dooraahada heer dowlad Goboleed ee Jubbaland ayaa dhawaan sheegay in doorashada Xubnaha Aqalka sare ku qabanayaan waqtigii loo qorsheeyay oo aheyd 25-ka bishan oo maalinta berri ku beegan, isla markaana ay u diyaar u yihiin qabashada doorashada.
Ammaanka Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG-ka ah ee Maamulka Jubbaland ayaa siweyn loo adkeeyay, isla markaana waxaa gudaha Magaalada laga dareemayaa qaban-qaabada doorashada Senatorada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Wararka14 hours ago
Ciyaaraha3 days ago
Diyaarda Milatari Oo Ku Dhacday Garoonka Diyaaradaha Ee Magaalda Xudur
Madaxweyne Farmaajo iyo Amiirka Qatar Oo Qadka Talefoonka kuwada Hadlay.
Diyaarad Siday Rakaab Oo Ku Soo Dhacday Gobalka Gedo.
Dawlada Fedraalka Soomaaliya Oo Ka Hadashay Duqeyn Ka Dhacday Galmudug.
Madaxweyne Farmaajo Oo Munaasabada Ciida La Qaatay Ciidanka Xooga Dalka.
Ciidamada Dawlada Oo Howlgal Ka Wada Koofurta Mudug.
Shaqaalaha Dawlada Ayaa La Fasaxay Mudo Sadax Maalin Ah.
Ciidamada Dawlada Oo Howgalo Ka Sameeyey Jubada Hoose.
Madaxweyne (Cagjar) Oo Sagootiyey Ciidamo(Sawirro).
Ciidamo Ka Tirsan Kumaandooska Gorgor Oo La Dhaariyey(Sawirro).
Safiirka Turkiga Ufadhiya Soomaaliya Oo Kulan Laqaatay Wasiir Beyle.
Guddiga Dib u Heshiisiinta Gobolka Gedo Oo Gaaray Magaalada Kismaayo.
Ciidamada Dawlada Oo La Wareegey Deegaanka Camaara.
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Oo Howlagalo Ka Wada Degmooyinka Gobalka Banaadir.
Ciidanka Xooga Dalka iyo Alshabaab Oo Ku Dagaalaya Gobalka Mudug.